Afar sababood oo ku kalifay go’aanka Farmaajo - Axadle – Axadle
Afar sababood oo ku kalifay go’aanka Farmaajo – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Madaxweynaha xilka kasii dagaya Maxamed C / llaahi Farmaajo ayaa shalay u sheegay Mudanayaasha in amniga iyo hoggaanka doorashada lagu wareejiyay Ra’iisul Wasaare Rooble.
In kasta oo mucaaradka weli dood ka qabaan madaxweynaha si loo wareejiyo xaaladda nabadgelyo ee dalka loona beddelo hoggaanka, haddana waxaa loo arkaa mid quruxsan oo dabacsan bilooyinkii la soo dhaafay.
Wareejinta madaxweyne Farmaajo ee amniga iyo hoggaaminta waxaa loo arkaa inay ka dhalatay afar arrimood oo aad u daran, oo qasab ku ah.
1 – Dagaaladii ka dhacay Caasimadda Muqdisho waxaa ka dhashay luminta qaybo badan oo magaalada ka mid ah, iyadoo degmooyin badan ay la wareegeen xoogag ka soo horjeeday muddo kordhinta.
2-Dowlada ayaa wajaheysa dhaqaale xumo xoogan, taasi oo meesha ka saartay arimo badan oo dowlada ay la daalaa dhaceysay dhanka dhaqaalaha gaar ahaan saraakiisha ciidamada ee ka soo jeeda beesha hawiye ee la laaluushay.
3-Furitaanka dhammaan maamul goboleedyada ee Villa Soomaaliya, marka la eego ballaarinta, oo ay ugu dambeysay Galmudug, HirShabeelle iyo Sydväst.
4- Iyo Beesha Caalamka oo cadaadis xoogan saartay madaxweynaha, kuna hanjabay cunaqabateyn, kala noqoshada aqoonsiga iyo cunaqabateyn kale.
Dad badan ayaa u arka Madaxweyne Farmaajo oo markii hore damacsanaa inuu xoog ku muquuniyo mucaaradka, inuu dareemo awood la’aan magaalada ka dib dagaallo qaraar oo ka dhacay qaybo ka mid ah Caasimadda Muqdisho, kuwaasoo ka dhashay khilaafaadka doorashada iyo muddo kordhinta.
Farmaajo wali si rasmi ah uma uusan wareejin amniga doorashada iyo hogaankiisa, waxaana jira caqabado cusub oo horyaala mucaaradka.
Mucaaradka ayaa ugu baaqay madaxweynaha inuu is casilo, laakiin waxay sheegeen inuusan mar kale u tartami doonin doorashada.
AKHRISO: 9 Xaqiiqo Oo Ku Saabsan Manchester United & Liverpool,